ESI ABANYE N'IME ICLOUD SITE NA KOMPUTA - WINDOWS - 2019
Esi abanye n'ime iCloud site na PC
iCloud bụ ọrụ ntanetị wepụtara site na Apple ma na-eje ozi dị ka ebe nchekwa data online. Mgbe ụfọdụ, enwere ọnọdụ ị chọrọ ịbanye na akaụntụ gị site na kọmputa. Nke a nwere ike ime, dịka ọmụmaatụ, n'ihi enweghị nkwarụ ma ọ bụ enweghị ngwaọrụ "apple".
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na e mepụtara ọrụ ahụ maka ngwaọrụ ndị e ji edepụta, ikike ịbanye na akaụntụ gị site na PC dị. Isiokwu a ga-agwa gị kpọmkwem ihe omume ị kwesịrị ime iji banye na akaụntụ gị ma mee ntuziaka ndị a chọrọ iji melite akaụntụ gị.
Hụkwa: Otu esi emepụta ID ID
Anyị na-abanye iCloud site na kọmputa
Enwere ụzọ abụọ ị ga - esi abanye na akaụntụ gị site na PC ma hazie ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Nke mbụ bụ nbata site na ebe nrụọrụ weebụ iCloud, nke abụọ bụ iji ihe omume pụrụ iche sitere na Apple, nke e mepụtara maka PC. Nhọrọ abụọ ahụ bụ ihe omimi na ọ dịghị ajụjụ ọ bụla pụrụ iche ga-aga n'ụzọ.
Ị nwere ike ịbanye na akaụntụ gị site na ebe nrụọrụ weebụ Apple. Nke a anaghị achọ ihe ọ bụla ọzọ, ma e wezụga maka njikọ Ịntanetị nwere ike na ohere nke iji ihe nchọgharị. Nke a bụ ihe ị ga - eme iji banye n'ime iCloud site na saịtị:
Gaa na isi peeji nke ebe nrụọrụ weebụ nke ọrụ ọrụ iCloud.
Tinye adreesị email gị na paswọọdụ Apple ID, nke ị kwuru n'oge aha. Ọ bụrụ na enwere nsogbu na ọnụ ụzọ, jiri ihe ahụ "Chefuola ID ID gị ma ọbụ paswọọdụ gị?". Mgbe ị banyere data gị, anyị na-eji bọtịnụ kwesịrị ekwesị tinye akaụntụ ahụ.
Na ihuenyo ọzọ, ọ bụrụ na ihe niile dị na akaụntụ ahụ, windo na-anabata ga-apụta. Na ya, ị nwere ike ịhọrọ asụsụ gị na mpaghara oge gị. Mgbe ịhọrọ nhọrọ ndị a, pịa ihe ahụ "Malite iji iCloud".
Mgbe ihe ahụ gasịrị, menu ga-emeghe, na-edegharị kpọmkwem otu ihe na ngwaọrụ Apple gị. Ị ga-enwe ike ịnweta ntọala, foto, ndetu, ozi, kọntaktị, wdg.
Usoro 2: iCloud maka Windows
E nwere mmemme puru iche nke Apple mepụtara maka Windows operating system. Ọ na-enye gị ohere iji otu atụmatụ ndị dị na ngwaọrụ mkpanaka gị.
Download iCloud maka Windows
Iji banye n'ime iCloud site na ngwa a, ị ghaghị ime ihe ndị a:
Mepee iCloud maka Windows.
Tinye nkọwa nbanye maka akaụntụ ID Apple. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na pịa ndenye "Chefuola ID ID gị ma ọbụ paswọọdụ gị?". Anyị pịa "Nbanye".
Window ga-apụta maka izipu ozi nchọpụta na n'ọdịnihu ga-ekwe ka Apple melite ogo ngwaahịa ya n'ụzọ ọ bụla. Ọ dị mma iji pịa ebe a. "Zipụ na-akpaghị aka", ọ bụ ezie na i nwere ike ịjụ.
Na ihuenyo ọzọ, ọtụtụ ọrụ ga-apụta, ekele nke, ọzọ, ọ ga-ekwe omume ịhazigharị ma bulie akaụntụ gị.
Mgbe ị pịrị "Akaụntụ" Nchịkọta nhọrọ ga-emeghe nke ga-ebuli ọtụtụ ntọala akaụntụ gị.
Iji ụzọ abụọ a, ị nwere ike ịbanye na iCloud, wee hazie akụkụ dị iche iche na ọrụ ndị na-amasị gị. Anyị nwere olileanya na isiokwu a nwere ike inyere gị aka.